दमकको लाईफलाइन अस्पतालबाट फिजियोथेरापी सेवा शुरु - Limbuwan khabar
दमकको लाईफलाइन अस्पतालबाट फिजियोथेरापी सेवा शुरु
शनिबार, २५ पुष, २०७७ बिहानको ०७:३६ बजे, लिम्बुवान न्युज
दमक। दमकको लाईफलाईन अस्पतालले २२औं बार्षिकोत्सवका अवसर पारेर शुक्रबारदेखि फिजियोथेराजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालमा आउने विरामीहरुलाई लक्षित गरि दमकमै पहिलोपटक फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिएको अध्यक्ष डा. तिलक चन्द्र शाहले बताउनु भयो ।
बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्व मेडिकल डाईरेक्टर डा. मुक्तिनाथ भट्टराई, संस्थापक अध्यक्ष शेरबहादुर भट्टराई, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सञ्चालक राजकुमार भट्टराईले फिजियोथेरापीको सेवा पनि स्वास्थ्य बिमाबाट नै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी बताए ।
त्यस्तै अस्पतालले सुरु गर्न लागेको डायलोसिस सेवाको समेत अन्तिम तयारी भइरहेको हुँदा अब केही दिनभित्रमै संचालनमा ल्याउने बताइएको छ ।
सेवाग्राहीहरुलाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आफूहरु सदैब प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा अझ नयाँ प्रबिधि र सेवाहरु विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको अध्यक्ष डा. शाहले बताए । एक सय शैया रहेको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवासहित सिटीइभिटीको समन्वयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरिआएको छ ।